Apple စတိုး | အိုင်ဖုန်းသတင်း
အ Apple ကပစ္စည်းအရောင်းဆိုင် ၄ င်းတို့သည် Apple ၏တရားဝင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစတိုးဆိုင်များဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့တွင်၎င်းတို့ထုတ်ကုန်များအားလုံးကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိနိုင်သည်။ သူတို့၏ ၀ န်ထမ်းများကသင့်အားအမြဲကူညီပေးသည်။ စုစုပေါင်း Apple စတိုးတစ်ခုတွင်အပြင်အဆင်နှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုအရ၎င်းတို့သည်ကုန်ပစ္စည်းများကိုမရောင်းလို။ သုံးစွဲသူအတွေ့အကြုံကိုရောင်းလိုကြသည်။ ဤတွင် Apple Store ၏စတိုးဆိုင်များနှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းများ၊ စတိုးဆိုင်အသစ်များ စပိန်မှာသာမကကမ္ဘာအနှံ့မှာဖွင့်လှစ်ထားတယ်။
Apple Store အက်ပလီကေးရှင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အား ထုတ်ကုန်စာရင်းများ ဖန်တီးရန် ခွင့်ပြုထားပြီးဖြစ်သည်။
por Ignatius ခန်းမ လွန်ခဲ့တဲ့6လအတွင်း .
Apple သည် Apple Store အက်ပလီကေးရှင်း၏ အပ်ဒိတ်အသစ်ကို ကျွန်ုပ်တို့ဝယ်ယူရုံသာမက၊
ယနေ့ Apple အစည်းအဝေးများတွင်ဥရောပ၌မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ရပြန်သည်
por Karim Hmeidan လွန်ခဲ့တဲ့9လအတွင်း .
Apple သည်ကြီးမြတ်သောထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်ပြီး ပို၍ အရေးကြီးသောအရာသည်၎င်း၏ထုတ်ကုန်များကိုရောင်းချရန်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလှုပ်ရှားမှုများပြုလုပ်သည်။
por Ignatius ခန်းမ လွန်ခဲ့တဲ့ 1 တစ်နှစ် .
Apple သည်ပြင်သစ်ရှိ Apple Stores များအားလုံးဆန္ဒအလျောက်ပိတ်ခဲ့သည်
ပြီးခဲ့သည့်တနင်္လာနေ့ မှစ၍ အက်ပဲလ်သည်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွင်ဖြန့်ဝေထားသော၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်စတိုးဆိုင်အားလုံးကိုပိတ်ပစ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
ကြိုတင်မှာယူမှုများ စတင်ရန် Apple ဝဘ်ဆိုဒ်ကို ပိတ်ထားသည်။
por Jordi Gimenez လွန်ခဲ့တဲ့ 1 တစ်နှစ် .
ဒီလိုကိစ္စတွေမှာ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့အတိုင်း၊ Cupertino ကုမ္ပဏီဟာ စတင်ဖို့အတွက် အွန်လိုင်းစတိုးအားလုံးကို ပိတ်လိုက်ပါပြီ။
တစ်ဖန် ထပ်မံ၍ Apple Store ၏အက်ပလီကေးရှင်းအက်ပလီကေးရှင်းများမှထုတ်လွှင့်သောအက်ပလီကေးရှင်းများအပေါ်ဝေဖန်မှုသည် ...
မက်ဒရစ်တွင် Apple ၏စတိုးဆိုင်များကိုဖွင့်သော်လည်းကန့်သတ်ချက်များရှိသည်
por Jordi Gimenez လွန်ခဲ့တဲ့2အနှစ် .
Apple သည်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် Apple Store Online ကိုဖွင့်လှစ်လိုက်သည်
por Karim Hmeidan လွန်ခဲ့တဲ့2အနှစ် .
အိန္ဒိယသည်အလားအလာအရှိဆုံးနိုင်ငံများအနက်တစ်ခုအပါအ ၀ င်ဖြစ်သည်။ နည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးများအားလုံး၏အမြင်များကို ...
စက်တင်ဘာလ ၂၃ ရက်နေ့တွင်အက်ပဲလ်သည်အိန္ဒိယ၌အွန်လိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်
por Ignatius ခန်းမ လွန်ခဲ့တဲ့2အနှစ် .
သြဂုတ်လကုန်ပိုင်းတွင်အိန္ဒိယနိုင်ငံရှိ Apple Store စတိုးကိုမကြာမီဖွင့်လှစ်တော့မည်ဟုအကြောင်းကြားလိုက်သည်။
App Store ရှိတရုတ်အက်ပလီကေးရှင်းများစွာ၏နောက်ဆုံးသတင်းများကို Apple ကလက်မခံပါ
Words of Wonders အဆုံးစွန်သောစကားလုံးရှာဖွေရေးဂိမ်း
တစ်ခါတစ်ရံပေါ့ပေါ့တန်တန်ကစားခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုနည်းနည်း“ စဉ်းစား” စေသည်၊ အတွင်း…